आमा बितेको हप्ता दिन नपुग्दै गयो बलिउड अभिनेता इरफान खानको ज्यान
बलिउड अभिनेता इरफान खानको उपचारका क्रममा निधन भएको छ। उनको ५४ वर्षको उमेरमा मुंबईको कोकिलाबेन अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। उनको अवस्था निकै गम्भिर थियो। इरफानको मृत्यु भएपछि पूरै बलिउड ...
चर्चित बलिउड अभिनेता खानको निधन
मुम्बई । अन्तराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त बलिउड अभिनेता इरफान खानको ५३ बर्षको उमेरनमा निधन भएको छ। खानको बुधबार बिहान मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालमा निधन भएको हो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि मंगलब...
सलमान खानका परिवारले चोरलाई पाहुना ठाने त्यसपछि...
काठमाडौँ । बलिउड अभिनेता सलमान खानको परिवार निकै ठूलो छ र त्यहाँ मानिसहरुको आवतजावत चलिरहन्छ। परिवारका सदस्यका साथीभाइ लगायत परिवारमा यति धेरै पाहुना आउँछन् कि एक दिन उनले घरमा आएको चोरलाई समे...
इरफान खान आईसीयूमा भर्ना
काठमाडौँ । बलिउड अभिनेता इरफान खानको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था किन बिग्रियो र उनको समस्या के हो र आईसीयूमा किन भर्ना गरियो, अहिले यसब...
नेपाली नायिकाले मोडलिङ गरेको बलिउड गीत सार्वजनिक
बैशाख १६, २०७७, मंगलबार
काठमाडौँ । नेपाली नायिका रिस्ता बस्नेतले मोडलिङ गरेको एक हिन्दी गीतको म्यूजिक भिडियोमा सार्वजनिक भएको छ। उनी अभिनित ‘साथिया तेरे विना’ बोलको भिडियो हालै प्रदर्शन भएको हो। जी म्यूजिक कम्...
चर्चित बलिउड अभिनेता इरफान खान आईसीयूमा भर्ना
भारत । अचानक स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि बलिउड अभिनेता इरफान खान भर्ना भएका छन्। उनलाई मुंबईस्थित कोकिलाबेन अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको हो। केही दिनअघि उनकी आमा सईदा बेगमको निधन भएको थियो । लकड...
पूर्व आईजिपी विरुद्धको उजुरी प्रहरीले नलिएपछि रविले सम्झे चितवनको घटना
बैशाख १४, २०७७, आइतबार
काठमाडौ । अपहरण शैलीमा आफूलाई महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याइएको भन्दै सांसद सुरेन्द्र यादवले काठमाडौं महानगरीय प्रहरी परिसरमा दिएको उजुरी लिन प्रहरीले आनाकानी गरेको छ। सांसद यादवले पूर्व आईजिपी सर्वेन्द्र खनाल...
अमिताभ बच्चनलाई कोरोनाले पिछा गर्न छाडेन!
अहिले विश्व समुदाय कोरोना भाइरस संक्मणका कारण त्रसित छ। विश्वभर यसको प्रभाव सेलाउने अझै छाँटकाँट देखिएको छैन। लाखौं मानिसको ज्यान लिइसकेको यस भाइरसको उपचार के हाला? वैज्ञानिकहरु केवल अनुमान म...
आफ्नै आमाको अन्तिम संस्कारमा पनि जान पाएनन् बलिउड अभिनेता इरफान खान
नयाँ दिल्ली । बलिउड अभिनेता इरफान खान आफ्नै आमाको अन्तिम संस्कारमा पनि उपस्थित हुन सकेका छैनन्। शनिबार साँझ इरफान खानकी आमाको निधन भएको हो। लामो समयदेखि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले उनकी आमा सईदा बे...
शोकमा डुब्यो अभिनेता इरफान खानको परिवार, आमाको निधन
नयाँ दिल्ली । बलिउड अभिनेता इरफान खानको परिवार शोकमा डुबेको छ। शनिबार साँझ इरफान खानकी आमाको निधन भएको हो। लामो समयदेखि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले उनकी आमा सईदा बेगमको ७१ वर्षको उमेरमा शन...